मनाङ डढेलाे : रातदिन नभनी भोकभोकै आगो निभाइरहेछन् स्थानीय, सरकार खै ? « News24 : Premium News Channel
मनाङ डढेलाे : रातदिन नभनी भोकभोकै आगो निभाइरहेछन् स्थानीय, सरकार खै ?
मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले आगो लगाउने व्यक्तिको खोजी गरी कारवाही गरिने बताउनुभयो । ‘‘आगोको त्रासमा प्रशासन भयवित भएका जनतालाई सुरक्षा दिन दिनरात नभनी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा बस्ती जोगाउने काम भइरहेको छ’’, उहाँले भन्नुभयो । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा आगलागीका घटना भइरहेकाले जिल्लाका सबै संयन्त्र परिचालन गर्दागर्दै पनि नियन्त्रणमा लिन कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ । – रासस